I-Lenovo Z6 Pro iya kubamba iifoto ze-MP ezili-100 kwaye iya kuba neekhamera ezine zangasemva | I-Androidsis
I-Lenovo Z6 Pro iya kubamba iifoto ze-MP ezili-100 ngenxa yomsebenzi weekhamera zayo ezine zangasemva
I-Lenovo kutsha nje iqinisekisile ukuba i-flagship yayo ye-smartphone elandelayo, I-Lenovo Z6 Pro, izokwazisa ngokusesikweni kwilizwe lakho nge-23 ka-Epreli. Ngaphambi kokuba kwenzeke oku, iinkcukacha ezininzi zesixhobo ziye zatyhilwa kwi-Intanethi.
Kuhlaziyo lwamva nje, usekela-Mongameli kunye nomphathi Jikelele weNkampani yabathengi yase China yeLenovo wabelane nabanye ngeefoto zeempawu zefowuni ngeWeibo, Ukuqinisekisa ubuchule bayo bekhamera kunye nokufota okufikelela kwi-100 MP.
Isigqeba sikuqinisekisile oko I-Lenovo Z6 Pro iza kuza neensimbi ezine zekhamera ngasemva kwaye isivamvo esiphambili soqwalaselo siya kuba zii-megapixels ezingama-48. Kukwabonakaliswe ukuba ifowuni iya kuba nakho ukuthatha iifoto zesisombululo se-megapixel eziyi-100, ezinje nge Kulungile bekuthelekiswa.
I-Lenovo Z6 Pro iza kuza neekhamera ezine zangasemva kwaye iya kuthatha iifoto ze-MP eziyi-100
Kutshanje kuvuza oko iselfowuni iya kuza nescreen senotshi ye-waterdrop kwaye inikezele nge-90% yomlinganiso wesikrini ukuya kumzimba. Ngapha koko, ifowuni iyakuza kunye ne-in-display sensor yeminwe.
Kwiveki ephelileyo, umphathi wenkampani uthumele umfanekiso wefowuni yenethiwekhi kwi-Weibo, eqinisekisa oko I-Z6 Pro iya kubandakanya inkxaso yokunxibelelana kwe-5G.
Njengoko kulindelwe, isixhobo siya kunikwa amandla yi-chipset yakutshanje kunye neyona chipset inkulu, i Snapdragon 855, iyenza i-smartphone yesibini evela kwinkampani ukusebenzisa le chipset emva kwe ILenovo Z5 Pro GT, ekwanikezela ukuya kuthi ga kwi-12GB ye-RAM.
Okwangoku, akukho lwazi lufumanekayo malunga noku Iiflethi ukusuka. Nangona kunjalo, kuphela iintsuku ezimbalwa kude kube ngumhla wokukhutshwa, ke akukho mfuneko yokuba silinde ixesha elide ngaphambi kokuba sazi ngokuqinisekileyo zonke iinkcukacha zayo, kunye nexabiso kunye nokufumaneka kwayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Lenovo Z6 Pro iya kubamba iifoto ze-MP ezili-100 ngenxa yomsebenzi weekhamera zayo ezine zangasemva
I-BlackBerry Messenger ivala iingcango zayo ekupheleni kwenyanga kaCanzibe
Esinye iselfowuni sokudlala iFortnite: iRedmi Qaphela i-7 Pro iya kufumana inkxaso yomdlalo kungekudala